ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့အတိုချုံးခဲ့ကြပေမယ့်ယူအက်စ်အေကမ္ဘာ့ဖလားကရပ်ဂ်ဘီကိုကောင်းကင်ကိုပို့နိူင်တယ် | 1xbet
ဒီသီချင်းဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေခြင်းနဲ့ရပ်ဂ်ဘီရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပါဝင်ရတာဟာအခွင့်ထူးတစ်ခုပါပဲ။ ရပ်ဂ်ဘီသည်ဘောလုံးအဆင့်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုချဉ်းကပ်လိုလျှင် – သို့မဟုတ်အမေရိကန်တွင်ဤအကြောင်းအရာကိုဖတ်နေလျှင်ဘောလုံး – ၎င်းသည်လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သောကမ္ဘာအနှံ့အားကစားကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အာရှမျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များသည်ကောင်းမွန်စွာမှုတ်သွင်းခံနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်မိပါသည်။ MLR ၏မြင့်တက်မှုသည်ကမ္ဘာ့ဖလားအလွတ်တွင်ရှိနေသော်ငြား US rugby အားပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ကိုပေးသည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးကလက်ခံခဲ့ပုံကမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမူပိုင်ခွင့်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီး Japan v Samoa ဂိမ်းရဲ့ညနေခင်းမှာ Kumagaya ရှိပရိသတ်ဇုန်ကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကန် – ချွတ်မီတစ်နာရီခွဲလောက်သူကထုပ်ပိုးထားပြီးဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာချယ်လ်ဆီးရဲ့လမ်းများပေါ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ A-list နာမည်ကြီးတွေကိုတွေ့လိုက်သလိုပါပဲ။ အဖေကသူတို့ကလေးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းတယ်။ ပြိုင်ပွဲမှာလူတိုင်းပါ ၀ င်ချင်ကြတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာစကားအတားအဆီးများကြားမှကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်များကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါကတော်တော်အစွမ်းထက်တဲ့အရာပါ။
ထိုအခါပြိုင်ပွဲများသူတို့ကိုယ်သူတို့ရှိခဲ့သည်။ ဒီဗုံသံတွေကိုမထွက်ခင်လေးမှာကြားရတာကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာ Gladiator ရုပ်ရှင်မှာရှိနေသလို Colosseum ထဲဝင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ငါထွက်ပြေးတိုင်းငါစဉ်းစားလိမ့်မယ်: “ဒါကအကြောင်းအားလုံးပါပဲ” နှင့်ငါ့အာရုံကြောဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့လှည့်လိမ့်မယ်။အဲဒီမှာမတ်တပ်ရပ်ပြီးနိုင်ငံတော်သီချင်းသီဆိုခြင်းဟာကျန်တဲ့တစ်သက်တာအတွက်ကျွန်တော်မှတ်မိနေမယ့်အရာတစ်ခုပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းခန်းမမှာအဝေးကနေဂျပန်ကစားခြင်းကိုကြည့်ရတာတောင်ထူးခြားခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီကဤကော်လံတွင်ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း Brave Blossoms သည်အလွန်ကောင်းသည့်ဘက်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ဂိမ်းကိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်နေကြပြီးသင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသင်းများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လာရန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရည်အချင်းအရှိဆုံးအသင်းများထဲမှတစ်ခုအမြဲဖြစ်ရန်မလိုပါ။ သူတို့သည်အရှိန်အဟုန်ကောင်းခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုကောင်းခြင်းနှင့်ရပ်ဂ်ဘီကစားခြင်းများဖြင့်ကစားခဲ့ကြပြီး ၄-၅-၁၂ ပြိုင်ပွဲတွင်သူတို့၏နေရာကိုလုံးဝထိုက်တန်သည်။ သူတို့၏အောင်မြင်မှုသည်အိမ်ရှင်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နိုင်ခြင်းမရှိသောအသံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
စိုထိုင်းဆနှင့် ပတ်သက်၍၊ wow! ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောဖီဂျီ၌ဤကဲ့သို့သောအရာခံစားခဲ့ရပေမယ့်ငါကအရမ်းအစွန်းရောက်လိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့ပေ။ကိုဘေးမြို့ရှိခေါင်မိုးအောက်တွင်ကစားခြင်းသည်မိုးရေထဲ၌ကျန်ရှိနေသောချောသောဘောလုံးနှင့်အတူကျယ်ပြန့်သောဖန်လုံအိမ်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ဒုတိယပိုင်းတွင်ကစားသမားအားလုံးသည်အချိန်တစ်ဝက်တွင်ရေပန်း၌ရပ်နေသည်ဟုထင်ရသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အရည်အချင်းကိုအပြီးသတ်စမ်းသပ်မှုဖြစ်စေပြီးဤပြိုင်ပွဲတွင်အဝေးဆုံးသောအသင်းများသည်ဘောလုံးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်သူများဖြစ်ကြောင်းသင်သဘောပေါက်စေသည်။
အခြားကြီးမားတဲ့သင်ခန်းစာ? နောက်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအာဂျင်တီးနား၊ ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလန်တို့ကဲ့သို့သောပြိုင်ပွဲများကိုထပ်မံအဆင့် ၂ ဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသည်။ ငါတို့မဝေးဘူး။ ကျနော်တို့ပုံမှန်ထိတွေ့မှုကနေလာပါတယ်, ဒီထက်နည်းနည်းနည်းနည်းပဲလိုအပ်ပါတယ်, ဦး ဆောင်အသင်းများကိုဆန့်ကျင်အမှားတွေလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကုန်ကျအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကိုသူတို့ရဲ့အမေရိကရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့အုပ်စုတစ်စုကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကမ္ဘာ့ဖလားမှာချက်ချင်းအဆင်သင့်ဖြစ်မယ်လို့မမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ Robert Kitson နောက်ထပ်ဖတ်ရန်
ဒီပြိုင်ပွဲမှာခင်ဗျားကွာဟချက်ကိုတွေ့မြင်ပြီးပါပြီ။ ဥရုဂွေးနိုင်ငံသည်ဖီဂျီကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပြင်သစ်နှင့်အတူခြေချောင်းမှမိနစ် 60 အဘို့အရပ်နေ၏။ ပြီးတော့ဂျပန်ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်အမှတ် ၁၀၀ အနိုင်ရသောအမြတ်ရရှိခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးပိုကောင်းတဲ့စနစ်တကျနှင့်အသင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်သင်ယခုကြောင်း get ဘယ်တော့မှပါတယ်။ အကယ်၍ ကွာဟချက်ကိုထပ်မံလျှော့ချလိုလျှင်နှစ်စဉ်အနည်းဆုံးအဆင့်တစ်ခုနှင့်ဂိမ်းနှစ်ခုကိုသင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ယူအက်စ်ရပ်ဘီတွင်ကမ္ဘာ့ဖလားအိမ်တွင်မြေသားပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်စိတ်အားထက်သန်မှုလည်းရှိသည်။လွန်ခဲ့သောရှစ်နှစ်တာကာလကဂျပန်သည်ဤပြိုင်ပွဲကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ US မှာဂျပန်ကိုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ရပ်ကွက်အသစ်သို့သွားခြင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရပ်ဂ်ဘီကြီးထွားရုံမျှမကအားကစားကိုအခြားအဆင့်သို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပွဲကြည့်ပရိသတ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အိမ်မှနောက်ကောက်ကစားခြင်းများတွင်ပျော်မွေ့ခြင်းအတွက်အခြေချရမည်။ အဲဒီမှာစတိုးဆိုင်ထဲမှာတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့လေးပုံတစ်ပုံဗိုလ်လုပွဲတွေရှိနေပြီးဒီကမ္ဘာ့ဖလားကိုဆက်ပြီးအံအားသင့်စရာ၊ တိုင်ဖွန်းတွေထပ်မတွေ့တော့ဘူး၊ ကံကောင်းခြင်းတွေဆက်ရပ်နေတဲ့အသင်းအားလုံးကိုငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ငါထွက်ရှိတော့မှာပါ။ အင်္ဂလန်ကိုဆက်ပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားလိမ့်မယ်။